कोभिड–१९ : चुनौती र सम्भावना सँगसँगै- विचार - कान्तिपुर समाचार
कोभिड–१९ : चुनौती र सम्भावना सँगसँगै
आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् ।
जेष्ठ ३२, २०७७ कल्पना धमला
कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) सँग पौंठेजोरी खेल्नु हाम्रो दिनचर्या बनेको छ । युरोप, अमेरिका, बेलायत, इटालीजस्ता विकसित देशहरू यसको चपेटामा पर्दा दक्षिण एसियाकै विकासोन्मुख र गरिब देशहरूमा संक्रमण फैलिसकेको थिएन ।
संक्रमण फैलिएमा यसको सामना गर्न तयारीका लागिनेपालका लागि पनि पर्याप्त समय थियो । सरकारले केही तयारी पनि गर्‍यो, समयमै लकडाउन गरेर केही हदसम्म संक्रमण नियन्त्रण पनि गर्न सक्यो । त्यससँगै समानान्तर रूपमा ‘टेस्टिङ, ट्रेसिङ’ आदि हुन नसकेका कारण, राज्यको फितलो व्यवस्थापनका कारण संक्रमण भुसको आगोझैं फैलिरहेको छ ।
परीक्षण, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन संक्रमण रोकथामको पहिलो र अनिवार्य प्रक्रिया हो । तर सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन सकिरहेको देखिँदैन । क्वारेन्टिन नै संक्रमणको केन्द्र बन्न सक्ने खतरा देखिन्छ । यसैले क्वारेन्टिनमा भौतिक दूरीको पालना, धारा/शौचालयको राम्रो व्यवस्था, लामखुट्टेरहित कोठाहरू, खानपान र सरसफाइको राम्रो व्यवस्था जरुरी छ । तर, संक्रमण हुनबाट बचाउनुलाई मात्रै नागरिकको जीवनरक्षाको प्रश्न बनाइनु हुँदैन । अन्य रोगका कारण झन् धेरै मानिसको ज्यान गइरहेको छ । गरिब तथा विपन्नहरू झन् चर्को गरिबीमा परेका छन् । कतिपय भोकमरीकै अवस्थामा पुगेका छन् । लाखौंको रोजगारी गुमेको छ, अझै गुम्ने खतरा छ । दिनानुदिन महिला हिंसा र हत्यासँगै अन्य कारणले आत्महत्या गर्नेको संख्या उल्लेख्य मात्रामा बढेको छ । यो भाइरसको प्रभाव कहिलेसम्म रहन्छ ? यसको दीर्घकालीन नियन्त्रण र रोकथाम कसरी गर्न सकिन्छ ? यसको कुनै आधार पत्ता लाग्न सकेको छैन । यो परिस्थितिको सामना गर्दै अगाडि बढ्ने विकल्पको खोजीसँगै जनजीवन सामान्य र अर्थव्यवस्था सन्तुलित बनाउनतिर सरकार गम्भीर हुनुपर्छ ।
कोभिड–१९ ले सबै क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । अझ आर्थिक क्षेत्रमा बढी समस्या देखिन थालेको छ । संसारभरि करोडौं मानिस गरिबीको चपेटामा पर्ने अनुमान छ । भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाका कारण हाम्रोजस्तो परनिर्भर अर्थतन्त्र खुम्चने प्रस्ट छ । देशमा भित्रिने रेमिट्यान्समा नराम्रो प्रभाव पार्दै छ । कृषि, पशुपालन, पर्यटन, ठूला–साना सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय, सार्वजनिक यातायातका क्षेत्र अवरुद्ध छन् । यी क्षेत्र धराशायी बन्नु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । तर, अँध्यारो रातपछि घमाइलो दिन आउनु ध्रुवसत्य भएजस्तै चुनौतीसँगै सम्भावनाका ढोकाहरू पनि खुल्छन् । संसारभरिका परिवर्तन कि त ठूलठूला क्रान्तिपछि भएका छन्, कि ठूलठूला दैवीप्रकोप र महामारीको सामना गरिसकेपछि । कोभिड–१९ का कारण फेरि एकपटक विश्वभरका राजनीतिक र आर्थिक केन्द्रहरू बदलिने सम्भावना छ । विकसित मुलुकहरू मानव–प्रकृति सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य हुनेछन् । हाम्रोजस्तो मुलुकका लागि पनि स्वाधीन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण सम्भावनाका ढोकाहरू खुल्ने निश्चित छ ।
नयाँ अवस्था निर्माणका लागि क्रमभंगता जरुरी हुन्छ । लामो कालखण्डदेखि आयातित र परनिर्भर रहँदै आएको अर्थव्यवस्थालाई रातारात आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्न । त्यसका लागि सुविचारित पाइला अघि सार्दै जानुपर्छ, धैर्यपूर्वक । जल, जमिन, जंगल, जडीबुटी र जनशक्तिजस्ता आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था निर्माणमा आवश्यक महत्त्वपूर्ण र मजबुत स्रोतहरू हामीसँग प्रशस्त छन् । नेपाल संसारमै विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने दोस्रो धनी देशका रूपमा परिचित छ । तर अझै १० प्रतिशत नागरिकको पहुँचमा बत्तीको उज्यालो पुग्न सकेको छैन । विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा राज्यको गम्भीरता अत्यावश्यक छ । निजी क्षेत्रका उत्पादकलाई पनि प्रेरित गरिरहनुपर्छ । तर अहिलेको बजेटले विद्युत् उत्पादकलाई निराश बनाएको छ, जुन कुनै पनि हिसाबले राम्रो भएन । निजी लगानीकर्तालाई प्रेरित गर्न ब्याजदरमा सहुलियत कायम गर्दै विद्युतीय साधनहरूमा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । विद्युत्को प्रयोगबाट ग्यास, डिजेल र पेट्रोलको आयातलाई कम गर्नुपर्छ ।
हिमाल, पहाड, तराईको पहिचान बोकेको हाम्रो देशमा भीरपाखा, उपत्यका, टार, ठूला–साना फाँट र समथर मैदानको कमी छैन । सबैतिर बस्ती विकास, चक्लाबन्दी खेती र व्यवस्थित पशुपालन गर्न सकिन्छ । उच्च हिमाली भागहरूमा त्यहीँको हावापानी सुहाउँदो बहुमूल्य जडीबुटी र फलफूलको खेती अनि पशुपालनका ठूलठूला फार्महरू बनाउन सकिन्छ । पहाडी टार र मैदानहरूमा हावापानी अनुसारकै चक्लाबन्दी खेती गर्नुपर्छ । तराईमा खाद्यान्न उत्पादन गर्नुपर्छ । हिमाल र पहाडका होचा समथर डाँडाहरूमा ५०० घरभन्दा धेरैको बस्ती विकास गर्नुपर्छ । त्यहाँ बाह्रै महिना चल्ने पक्की बाटो, स्कुल, क्याम्पस, सुविधासम्पन्न अस्पताल, खानेपानीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । तराईमा पनि बस्ती विकासको नीति लिनुपर्छ । यसो गर्दा मात्र जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाउँछन्, रोजगारी र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।
उत्पादनसँगै बजार व्यवस्थापन राज्यले नै गर्नुपर्छ । स्वदेशमै मल, बीउ कारखाना खोलेर सहुलियतमा बिक्री–वितरण गर्नुपर्छ । हाम्रा वनजंगल जडीबुटीका अनवरत स्रोत हुन् । तिनको खपत स्वदेशमै गर्न सकिन्छ । आयुर्वेदिक अनुसन्धान केन्द्रलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । आवश्यकतानुसार औषधि उत्पादनको कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्नुपर्छ । लाखौं युवाशक्ति रोजी– रोटीकै लागि बिदेसिए, लाखौं युवा स्वदेशमा अवसर देखे पनि कार्यान्वयन गर्नमा उल्झन भएर परदेश लागे । स्वदेशमै राज्यले लगानीको सहजता, सहुलियत र उत्पादित वस्तुको बजार व्यवस्था गरे लाखौं नागरिक विदेश नजान सक्छन् । स्वदेशमा गरेको श्रमले रोजी, रोटी र परिवार चल्ने भए आफ्नै देशमा श्रम गर्न तयार सबैजसो तयार हुन्छन् । परिस्थितिले सिर्जना गरेको आवश्यकता र इच्छाशक्तिको मिलनविन्दु कोभिड–१९ हुन सक्छ भन्ने नबिर्सौं ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अपेक्षा
आर्थिक वर्ष २०७७–७८ का लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा छुट्याइएको बजेट र योजनाले तुलनात्मक रूपमा नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको राम्रै सम्बोधन गरेको देखिन्छ । तत्कालीन र आधारभूत आवश्यकताको भने सम्बोधन हुन सकेको छैन । निजी अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले आफूलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक महसुस गरेका छन् । तिनले उचित तलब र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्री पाउन सकेका छैनन् । सरकारी स्वास्थ्यकर्मीहरूले पनि उच्च मनोबलसहित काम गर्ने अवस्था छैन । महामारीको यो बेला राज्यले सबै स्वास्थ्यकर्मीका लागि राम्रो तलब, भत्ता र सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कोरोना विशेष अस्पतालबाहेक अन्य सरकारी र निजी स्वास्थ्य संस्थामा अरू रोगको उपचार र नियमित खोपलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।
क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरूका लागि पोषिलो र स्वास्थ्यकर खानपान, सरसफाइ, योग र प्रतिरोधी शक्ति बढाउने जडीबुटी र मसलाजन्य औषधिहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ । बेरोजगार, गरिब, विपन्न, दीर्घरोगी र अपांगहरू महामारीको अवस्था सामान्य भए पनि नियमित दैनिकीमा फर्किन सक्ने अवस्था नबन्दासम्म चामल, दाल, नुन, तेलसहित अत्यावश्यक औषधिहरू निःशुल्क रूपमा घरघरमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
संक्रमितको संख्या दिनानुदिन बढिरहे पनि परीक्षणको दायरा फराकिलो हुन सकिराखेको छैन । परीक्षणको दायरा बढाउँदा संक्रमितको संख्या बढ्ने निश्चित छ । अस्पतालहरूले यसको भार थेग्न पनि सक्दैनन् । यो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर संक्रमण देखिएका तर लक्षण नदेखिएका सामान्य संक्रमितलाई आइसोलेसनको नियम पालना गरेर बस्न सक्ने अवस्था छ भने घरमै राख्न प्रेरित गर्नुपर्छ । घरमा राख्न सक्ने अवस्था नभएको र संक्रमणको लक्षणसहित कमजोर बनेकालाई अस्पतालमा ल्याउनुपर्छ । सम्भावित गम्भीर अवस्थाको आकलन गरेर आईसीयु र भेन्टिलेटरको तयारी गर्नुपर्छ ।
कोभिड–१९ बाट सतर्क त हुनुपर्छ, त्रस्त चाहिँ होइन । यसलाई समस्याका रूपमा मात्रै नलिऔं र नबुझौं पनि । समस्याले समाधानको खोजी गर्छ । अनुभव, अध्ययन र आवश्यकताले नयाँ वैकल्पिक सम्भावनाका ढोकाहरू खोल्छ । यो विपत्तिलाई अवसरका रूपमा उपयोग गरौं ।
(धमला पूर्वमन्त्री हुन् ।)
प्रकाशित : जेष्ठ ३२, २०७७ ०९:२२
नयाँ बहसको अवसर
वैशाख ११, २०७७ कल्पना धमला
काठमाडौँ — कोरोना संकटले सबैभन्दा ठूलो प्रभाव हाम्रो रेमिटेन्समा पार्नेछ । युरोप, अमेरिका र खाडी मुलुकका कामदारको रोजगारी गुम्ने संघारमा छ । उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकृत अर्थव्यवस्थाको कारण आर्थिक क्षेत्र खुम्चिने प्रस्ट छ । कोरोना भाइरसले कृषि, पशुपालन, पर्यटन, खुद्रा व्यापार, सार्वजनिक यातायातलगायतका क्षेत्र अवरुद्ध पारेको छ । यी क्षेत्र धराशायी हुनु भनेको अर्थतन्त्र कमजोर हुनु हो । अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर बनाउन सके मुलुकको मुहार फेर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
चीनको वुहानबाट गत डिसेम्बरमा निस्केको कोरोना भाइरसले संसारभर चक्कर लगाइरहेछ । अहिलेसम्म लगभग २६ लाख मानिसलाई यो भाइरसले भेटिसक्यो । १ लाख ७९ हजार संक्रमितले ज्यान गुमाइसके । संक्रमणको त्रासले संसारभरका मानिस घरभित्रै थुनिएका छन् । विश्व अर्थतन्त्रमा आर्थिक मन्दी सुरु भइसक्यो । एसियाली विकास बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको कारण विश्व अर्थतन्त्रलाई ४०.१ खर्ब अमेरिकी डलर घाटा भइसकेको छ । सन् २०२० को आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतबाट २.२ मा झर्ने अनुमान छ ।
हामीले कोरोना भाइरस रोकथामका लागि पर्याप्त समय पाएका थियौं, छौं । विज्ञान–प्रविधिले पनि छेक्न नसक्नेगरी कोरोना महामारी फैलिरहेको छ ।
महामारीको बेला पहिलो प्राथमिकता अर्थतन्त्रभन्दा पनि जीवन जोगाउनु हो । भाइरसको दीर्घकालीन रोकथाम र नियन्त्रण अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यले सघाउँछ । त्यस्तै सरकारले आमनागरिक, राजनीतिक कार्यकर्तालाई विपत्मा परिचालन गर्नुपर्छ ।
स्थानीय सरकारहरू भाइरससम्बन्धी सचेतना फैलाउने, क्वारेन्टिन निर्माण र व्यवस्थापन, राहत वितरणलगायतका काममा खटिएका छन् । सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन कोरोना रोकथामका लागि महत्त्वपूर्ण प्रयास हो । केही कमीकमजोरीका बाबजुद अस्पताल र स्वास्थ्यचौकीहरूमा स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने सकारात्मक प्रयासहरू भइरहेका छन् । यदि कोरोना संक्रमण महामारीको रूपमा फैलिए यस्ता प्राथमिक प्रयासहरूले मात्रै हामी सुरक्षित रहन सकौंला ? मुलुकभरका कोरोना परीक्षण केन्द्रहरूमा परीक्षण किट, पीपीईलगायतका स्वास्थ्य सामग्री तुरुन्त उपलब्ध गराउनुपर्छ । स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षित स्वास्थ्य सामग्रीको व्यवस्था भए मात्रै कोरोना भाइरसको उपचार गर्न प्रेरित गर्छ ।
जटिल अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितलाई आईसीयू र भेन्टिलेटरको व्यवस्थाले सजिलो बनाउँछ । त्यसैले प्रत्येक कोरोना परीक्षण केन्द्रमा तत्काल १०० आईसीयू ५० भेन्टिलेटर सहितको सुविधासम्पन्न स्थायी संरचना बनाउनुपर्छ । स्रोत–साधनको उपयोग अहिलेको आवश्यकता हो । बेरोजगार स्वास्थ्यकर्मीलाई भर्ती गरेर आवश्यक जनशक्तिको पूर्ति गर्न सम्भव छ । स्वास्थ्य संरचना बनाउन चाहिने आवश्यक सामग्री सिधै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट जीटुजी प्रक्रियाअन्तर्गत खरिद गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य संरचना निमार्णमा अन्य निजी क्षेत्रबाट सहयोग लिने वातावरण पनि निर्माण गर्नुपर्छ ।
यसो गर्दा कोरोनाबाहेकका बिरामीको उपचार सम्भव हुन्छ । भारतमा संक्रमण बढिरहेको छ । यस्तोमा खुला सिमाना बन्द गर्न पनि लकडाउनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ ।
निजी अस्पताल सञ्चालन नियमावली बनाई सेवाप्रवाहलाई सुचारु पार्नेतर्फ सरकारको ध्यान जानुपर्छ । निजी अस्पतालले नियमसंगत नाफा मात्र कमाएका थिएनन्, वैधानिक ढंगले नै जनतालाई लुटिरहेका थिए । यस्तो असहज परिस्थतिमा पनि सहयोग नगर्ने निजी अस्पतालहरूलाई राष्ट्रियकरण गर्ने आँट सरकारले देखाउनुपर्छ ।
संसारभर ठूलठूला राजनीतिक क्रान्तिपछि परिस्थिति बदलिएको छ । देशहरू विकसित बनेका छन् । त्यस्तै क्रान्तिबाहेक ठूला प्राकृतिक प्रकोप र महामारीको सामना गरेपछि समाज बदलिएको छ । कोरोना भाइरले सृजना गरेको वातावरणले नयाँ ढंगले सोच्न बाध्य बनाएको छ । हाम्रोजस्तो विकासउन्मुख देशले नियन्त्रण प्रयास गर्दै अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । चुनौतीसँगै नयाँ अवसरको ढोका पनि निकट भविष्यमा खुल्नेछ ।
स्वास्थ्यलाई संविधानले मौलिक हकको रूपमा स्विकारेको छ । यही बेला सरकारले स्वास्थ्यमा नागरिक हक सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका लागि सर्वसुलभ र सुरक्षित स्वास्थ्य सेवामा आममानिसको पहुँच बढाउनुपर्छ । गाउँगाउँमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उपयुक्त समय हो यो । सातवटै प्रदेशमा सबै रोगको उपचार गर्न सकिने गरी सुविधासम्पन्न सरकारी अस्पताल निर्माण गर्ने आँट सरकारले गर्नुपर्छ । त्यसरी निर्माण गरिने अस्पताल त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको मोडलअनुसारको हुनुपर्छ । राज्यले चाँहदा यो सम्भव छ ।
कोरोनाले विश्व अर्थव्यवस्थामा पार्ने प्रभावका कारण जीवन गुजारा गर्न खाडी पुगेका वा सुखको आसमा युरोप अमेरिका गएका नागरिकबारे हामी नयाँ तरिकाले सोच्न बाध्य भएका छौं । व्यवसायहरू तहसनहस हुने संघारमा छ । अहिले उत्पन्न भइरहेको आर्थिक संकटका कारण आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको नयाँ सम्भावनाहरूबारे बहस गर्ने उपयुत्त समय मिलेको छ । फराकिलो छलफलले नीति र योजना निर्माणका साथै कार्यान्वयनमा मद्दत गर्छ । यस अर्थमा हामीलाई यो परिस्थतिले अघि बढ्ने अवसर दिएको छ । चुनौतीसँगै सृजित यो अवसर मनन गर्दै गम्भीर हुनुपर्छ ।
प्रकाशित : वैशाख ११, २०७७ १०:१८
Black Friday Deals on Daraz
एमालेका कम्युनिस्टप्रेमीसँग संवाद
आहुति मंसिर १२, २०७८
नेकपा (एमाले) को दसौं महाधिवेशन चलिरहेको छ । लाखभन्दा बढी मानिसको सहभागितामा उद्घाटन समारोह सम्पन्न हुनु भर्खर फुट बेहोरेको एमालेका निम्ति शानदार सफलता हो । आसन्न चुनावको...
पशुपतिनाथले सर्वोच्च अदालतको रक्षा गरून् !
अशोककुमार क्षेत्री मंसिर १२, २०७८
सन्दर्भ सुरुआतभारतमा कानुन व्यवसायमा करिब सात दशक बिताएका फली एस नरिमनको पुस्तक ‘गड सेभ द अनरेबल सुप्रिम कोर्ट’ (सन् २०१८) हाम्रो सन्दर्भमा निकै मिल्दोजुल्दो देखिन्छ ।...
कानुन राम्रो कार्यान्वयन फितलो
वर्षा झा मंसिर १२, २०७८
सन् १९९१ देखि सुरु भएको लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान यस वर्ष पनि मनाइँदै छ । यसको मुख्य उद्देश्य लैंगिकताका आधारमा हुने सबै प्रकारका हिंसा र अपराध अन्त्य...
घरबाटै थालौं लैंगिक हिंसाविरुद्धको अभियान
आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र स्वतन्त्रतालाई अखण्डित राख्न एवं हिंसारहित ढंगले सहअस्तित्वपूर्ण जीवन बाँच्न पाउनु हरेक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार हो र यसलाई मानव अधिकार पनि भनिएको...
कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट भित्रिन नदिन सतर्कता अपनाऔं
सम्पादकीय मंसिर १२, २०७८
नेपालले कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट पूर्ण त्राण पाउन बाँकी छँदै दक्षिण अफ्रिकामा सोमबार पत्ता लागेको कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्टले अरू चिन्ता थपेको छ । तीव्र गतिमा...
बढ्दो इन्धन मूल्य र हाम्रा विकल्प
संसारभर कच्चा तेलको भाउ बढ्दो क्रममा छ । यही कारण, पेट्रोल, डिजेल र खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढेको छ । सन् २०१९ ताका नेपालमा पेट्रोलको मूल्य १०८–११०...
जबजको औचित्य समाप्त भएकै हो ?
हीरा विश्वकर्मा मंसिर १०, २०७८
बहुदलीय चुनावबाट कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउन सकिँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता थियो । कुनै पार्टीले त्यस्तो चुनावबाट सरकार बनाए वा कोही सांसद बने संशोधनवादी मानिन्थ्यो । त्यस्तालाई शास्त्रीय...
महाधिवेशन र महिला प्रतिनिधित्व
एमालेको दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि नारायणी नदीको किनार झकमक्क भएको छ । महाधिवेशन निकै तामझामका साथ सम्पन्न हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमा...
पूर्ण खोप प्राप्त ८३,१३,८६१
अपडेटः आइतबार, १२ मंसिर, २०७८ । १६ : २६ बजे